कुनै पनि आधुनिक कार को उपकरण छ निकास प्रणाली। यो उत्प्रेरक, धेरै गुना निकास, निकास पाइप र resonator सहित धेरै भागहरु, को हुन्छन्। तर धेरै केहि मान्छे यस्तो विवरण मफलर को स्वागत पाइप रूपमा उल्लेख गरे। VAZ-2110 पनि सुसज्जित छ। यो तत्व के हो र यो कसरी काम गर्छ? यी र अन्य धेरै प्रश्नहरूको जवाफ, हाम्रो आजको लेखमा उल्लेख।
निकास फ्रंट पाइप निकास प्रणाली अभिन्न भाग हो। निकास धेरै गुना को सक्रिय तत्व पछि र resonator एक धातु आधार र corrugations हुन्छन् गर्न स्थित। उत्तरार्द्ध हरेक सिस्टम मा उपस्थित नहुन सक्छ।
को मफलर को एक स्वागत पाइप को व्यास के हो? UAZ "पैट्रियट" 60-मिमी तत्व संग सुसज्जित छ। व्यास प्रणाली अन्य घटक मा उपलब्ध तुलना: निकास पाइप, उत्प्रेरक र यति मा। निकास प्रणाली घटक को विशिष्ठ सुविधा - सजिलै प्रत्येक अन्य जडान जुन दुई आदानों भइरहेको। यसरी, पहिलो निकास ग्याँसहरु केन्द्रीय आउटलेट धेरै गुना मा पारित, र त्यसपछि branching सेवन पाइप मा। अर्को, इन्जिन देखि जारी ग्याँसहरु को उत्प्रेरक मा दबाब उत्प्रेरित हुन्छन्। यहाँ, सबै हानिकारक पदार्थ हाइड्रोजन मा खोल्दै afterburned, र बाहिर गर्न discharged। प्रणाली मा अन्तिम तत्व एक मफलर छ। यो ध्वनि र कम्पन चौरसाई, सबै ध्वनिक लोड को हेरविचार लिन्छ जसले छ। उत्पादन मा हामी सफा र शान्त निकास छ। सोही, पाउनुभएपछि ट्यूब को विशेषताहरु फरक हुन सक्छ। यो दुई वा बढी inlets संग सुसज्जित छ। व्यास सन्दर्भमा संग, मफलर GAZ-3310 को लागि प्राप्त पाइप 51 मिमी को एक आकार छ। को उत्प्रेरक गर्न जलाशय देखि उत्पादन ग्याँस - उद्देश्य तिनीहरूले नै छ।
स्वागत निकास पाइप इस्पात विभिन्न प्रकारका बनेको छ:
तिनीहरू सबै गुणस्तर र मूल्य मा फरक। का तिनीहरूलाई हेरौं।
यस्तो पाउनुभएपछि पाइप कारण आफ्नो उच्च लागत गर्न दुर्लभ छन्। स्टेनलेस स्टील सामान्यतया uniflow मफलर बनेको छ। यो यस्तो कवरेज धेरै प्रभावशाली छ देखिन्छ। दर्पण ट्यूब - सुन्दर उपस्थिति, तर पनि अन्य लाभ को धेरै मात्र छैन। यसरी, यो जंग गर्न सामग्रीको प्रतिरोध उल्लेख गर्नुपर्छ। रिसेप्शन पाइप कार को तल अन्तर्गत स्थित छ हुनाले यसलाई निरन्तर बाह्य कारक उजागर गरिएको छ। बाहिर यसको उजागर सतह माटो, पानी र अभिकर्मकों मा; उत्पादन भित्र उच्च थर्मल भार गर्न subjected छ।
स्टेनलेस स्टील यी कारक एक उच्च प्रतिरोध छ। साथै, निर्माण को जटिलता कारण कहिलेकाहीं यसको लागि मूल्य अधिक महंगा।
को मफलर को Aluminized स्वागत पाइप
यसलाई साधारण इस्पात बनेको छ। को विशिष्ठ सुविधा जंग एउटा वस्तुको सुरक्षा गर्न अभिप्रेरित गर्ने एल्यूमीनियम कोटिंग छ। यी पाइप को सेवा जीवनको बारेमा पाँच वर्ष छ। यसबाहेक Flexi नली संग सुसज्जित गर्न सकिन्छ।
पाइप कुनै पनि थप प्रक्रिया बिना साधारण इस्पात बनेको छ, त्यसैले जीवन अक्सर दुई वर्ष भन्दा बढी छैन। यो अवधि पछि, नयाँ भाग प्रतिस्थापन हुनुपर्छ। तलको क्रममा अन्य सामाग्री लागत सापेक्ष।
जो चयन गर्न?
को मफलर को सबै भन्दा साधारण स्वागत पाइप - aluminized। यो धेरै पटक इस्पात भन्दा कम लागत। जब यो अत्यधिक जंग र तापमान अचाक्ली प्रतिरोधी छ। मोटर चालकहरुलाई थप उपचार बिना साधारण कालो इस्पात बाहिर ट्यूब प्राप्त गर्न सिफारिस छैन। केही निर्माता यसलाई रंग को एक कोट लेपित छन्। तर हामी महिना को एक जोडी पछि, ट्यूब आकर्षक उपस्थिति गुमाउनु हुनेछ भनेर बुझ्न पर्छ: उच्च तापमान, माटो र पानी काम गर्नेछन्। र यसलाई हटाउन एकदम गाह्रो छ। तपाईं मफलर को एक गैसकेट स्वागत पाइप छ भने पनि, बोल्ट वोल्ट नट आदि खोल्नु सम्भव छैन: तिनीहरूले जमिनमा बलियो लिङ्कमा लिन। मात्र तरिका - टोपी Grinder कटौती गर्न। को स्टेनलेस downpipe लागि, यो 10 वर्ष हुन सक्छ। मात्र कुरा - बजार मा मूल्य र उपलब्धता छ। केही वाहन मा यस्तो विवरण आदेश किन्न छ।
विफलता स्वागत पाइप बाहिर कि कसरी निर्धारण गर्ने? को surest तरिका - एक दृश्य निरीक्षण छ। वस्तु एक बरु कठिन स्थानमा छ भएकोले लिफ्ट बिना यो निदान छैन। त्यसैले, धेरै मोटर चालकहरुलाई "कान द्वारा" दोष निर्धारण। निकास ध्वनि जोर भयो भने, अनावश्यक कम्पन देखा, र सानो घर त्यहाँ एक बलिरहेको गन्ध, सम्भवत, वस्तु अर्डर बाहिर छ। तर यो सधैं पाइप pierces छैन। अगाडि निकास पाइप corrugation उच्च तापमान LOADINGS अनावश्यक कम्पन र उत्तरदायी अवशोषित मार्फत बाल्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ, यी लक्षण को उपस्थिति therein निकास पाइप वा corrugation प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छ।
कसरी विस्थापन गर्न?
को dilapidated भागहरु प्रतिस्थापन गर्न एक सेट गर्न आवश्यक हुनेछ Wrenches को र उचाल्नु (रैक, अवलोकन राम्रो)। नयाँ पाइप बाहेक पनि gaskets एक सेट गर्न आवश्यक छ। पुरानो एक समय संकुचन।
यसरी, तल को सामने भाग मा हामी हाम्रो पाइप (सामान्यतया 13 मा bolted) पाउन। हामी संग अन्य बोल्ट वोल्ट नट आदि खोल्नु, एक हात ले नट समाधान। तपाईं loosening सुविधा एउटा विश्वव्यापी स्नेहक WD-40 प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो फास्टनरों हात grinders लिन र बस बोल्ट कटौती वोल्ट नट आदि खोल्नु गर्न असम्भव छ भने (त्यसपछि नयाँ किन्न भूल छैन)। हामी ट्यूब लगे, हामी calcination मा स्थान सफा र नयाँ तत्व स्थापना गर्नुहोस्।
को corrugations को प्रतिस्थापन सन्दर्भमा, पछिल्लो ट्यूब को गुहा मा welded गर्न। निस्सन्देह, यो (तपाईँले गर्दैन "लिनु" एक साधारण वेल्डिंग मिसिन स्टेनलेस स्टील, बनेको छ, विशेष गरी यदि) संग्रह मा एक नयाँ वस्तु किन्न सजिलो छ।
स्पिन गर्न बोल्ट को सतहमा टाँसिएको जोखिम कम लागि प्रक्रिया सिफारिस ग्रेफाइट चिल्लो वा "Litol।" यी फास्टनरों धेरै कच्चा भन्दा हटाउन सजिलो हुनेछ। यो प्रतिस्थापन प्रक्रिया मा पूरा भएको छ। तपाईं इन्जिन चलाउन र नयाँ पाइप गुणस्तर जाँच गर्न सक्छन्। यो लीक हुँदैन देखि। अन्यथा, तपाईं बोल्ट को जकडन जाँच गर्नुपर्छ। तपाईं नालीदार कटौती र एउटा नयाँ स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ भने, आफ्नो लम्बाइ ध्यान। आकार नै मा 20-40 मिलिमिटरमा (कटौती गरिनेछ र पाइप नै भाग) हुनुपर्छ।
दीपक इन्जिन समस्या, के रोशनी? इन्जिन मर्मत
Avtobafery: समीक्षा avtovlyubiteley
विद्युतीय अंतर ताला र UAZ गर्न बाध्य
किया रियो hatchback - एक उत्कृष्ट विकल्प
विलासिता पालकी अकुरा TSX
तपाईंको आफ्नै कर्ल कर्लिंग कसरी बनाउने
मिति जन्म - 1960। के पशु उहाँले वर्णन गर्छ?
सम्पत्ति को सूची कसरी
कसरी belyashi sculpt गर्न: व्यञ्जनहरु, विकल्प र समीक्षा। VAK-belyashi कसरी sculpt गर्न
तेल छाला लागि जग क्रीम: एक गुणवत्ता विकल्प, सही आवेदन
शक्ति को मापन लागि उपकरणहरू - dynamometer यांत्रिक, विद्युतीय, हाइड्रोलिक
हारून टेलर-जनसन: एक जीवनी र Filmography
मसालेदार अन्डा कसरी तयार